ဂလာတာဆာရေးကလပ်သည်ထူးခြားသောရွေးကောက်ပွဲအထွေထွေညီလာခံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်တစ်ခုချမှတ်ခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်အဝါရောင်ကလပ်သည် တူရကီသမ္မတနိုင်ငံပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ရက်၊ Z-89780865-153-19961 Circular No. သက်ဆိုင်ရာမြို့ပတ်ရထားနှင့်အညီ; 01.12.2020 ရက်စွဲပါဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးနှင့် 48 ရေတွက်; ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် 20 နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်စွဲပါနှင့်ထူးခြားသောရွေးကောက်ပွဲအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကျင်းပရန် 45 45 ဒီဇင်ဘာလ 2020 “ ထုတ်ပြန်ချက်များ။ ။ restbet giriş aşaması sonrası hızlı kazançlar sağlayacak işlemleri kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.
လူအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေကြသောဂလာတာဆာရေးအထူးအစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့နှင့်နေရာကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ကလပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ပြန်ချက်အရထူးခြားသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အစည်းအဝေးတွင်ပါ ၀ င်မှုအလုံအလောက်မရှိလျှင်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရေးသားထားသည်။ ဂလာတာဆာရေးကလပ်၏ထူးခြားသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ GALATASARAY SPORTS CLUB ASSOCIATION BORD မှသာမန်ထက်သာလွန်သောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန် တူရကီနိုင်ငံသားကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပCharterိညာဉ်စာတမ်းများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်၏ “ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေး” ကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ စနေနေ့တွင်ဂလာတိဆာရာအထက်တန်းကျောင်း Tevfik Fikret ခန်းမ၌ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ စနေနေ့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ကျင်းပလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ ၀ င်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ လေးစားစွာဖြင့် ဂလာတာဆာရေးအားကစားကလပ်အသင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ restbet giriş güvenilir bahis oynama sitesinde devamlı kazanç sahibi olabilmek mümkün.
အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်အသင်းဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်သူမသာရွေးချယ်ထားသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်လာမလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz ၏ဖော်ပြချက်များမှာ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိရွေးကောက်ပွဲများကိုကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ Mustafa Cengiz “ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်အပြီးမှာသူဟာ Ankara ကိုသွားပြီးအင်ကာရာကဒီကိစ္စကိုဆန်းစစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အစည်းအဝေးများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်အသိပေးခံခဲ့ရသည်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်တောင်မှမယုံခဲ့ဘူးအချို့ရှိခဲ့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတာဝန်အပေါ်လျှင်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုမေးခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းတရားရေးဆိုင်ရာစာဖြင့်ရေးသားတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်း, တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း။ ဒါကြောင့်သင်သိကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထောင်ချောက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ကပြောကြားသည်။ “ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေး!” သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမပြော, ဒါကြောင့်အတော်လေးသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သင်နေမကောင်းလျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲ။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်, သင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အဖြစ်စဉ်ကိုအခုအချိန်မှာကောင်းစွာတိုးတက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှလုပ်ရပ်ဘယ်အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှငါ့အဘို့, ငါတို့နှလုံးပေးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ပြင်ပကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါကအဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပုံရတယ်။ ငါမတိုက်နိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးထဲဝင်လို့မရဘူး၊ စီးပွားရေးအရအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူး။ RESTBET501 YAZI DEVAMI…
အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်အသင်းဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်ထူးခြားစွာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz ၏ဖော်ပြချက်များမှာ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်ထိရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်သူဟာ Ankara ကိုသွားခဲ့တာပါ။ အကြီးစားအစည်းအဝေးများကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမယုံသောအချို့ရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူသည်တာ ၀ န်ရှိသလားကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ တရား ၀ င်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်သင့်ကြောင်းတရား ၀ င်တရား ၀ င်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာကိုတောင်မှဖတ်။ မရခဲ့ပါ၊ ဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဤထောင်ချောက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ။ “ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေး!” သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းအဘို့ငါမပြောတတ်ပါကအတော်လေးသဘာဝဖြစ်ပါသည်။ RESTBET501 YAZI DEVAMI…